महानगरको बहाना : कोरोनाले कामै गर्न दिएन!
महानगरको बहाना : कोरोनाले कामै गर्न दिएन! काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सुस्त
अंगदबहादुर सिंह काठमाडौं - बिहीबार, कात्तिक २७, २०७७
उपत्यकाको ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक धरोहर।
शताब्दी औं पुरानो सम्पत्ति।
सुन्दर सांस्कृतिक सहरको परिचय बोकेको।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा जोडिएको।
सांस्कृतिक सम्पदाका कारण सुन्दर नगरीको पर्याय।
काष्ठमण्डपले पर्यटकमात्रै तानेको छैन्, महानगरको परिचय बोक्नुका साथै गरिमा पनि बढाएको छ।
तर, काष्ठमण्डप तहसनहस भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा समेत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।
२०७२ सालको विाशकारी भूकम्पले काष्ठमण्डप तहसनहस भयो।
त्यसको पुनर्निर्माणमा न सरकारले तत्परता देखायो न महानगरले।
र, त अहिलेसम्म पुनर्निर्माणकै क्रममा छ काष्ठमण्डप।
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन अझै ६ महिना कुर्नुपर्ने छ।
सुरुमा सरकारले काष्ठमण्डप बनाउन ढिलासुस्ती गरेको भन्दै स्थानीयवासी जुर्मुराए तर, एक्कासि काठमाडौं महानगरले आफंै बनाउने भन्यो।
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २०७३ वैशाख २९ मा सहमति भयो।
तीनवटै निकायले दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने भन्दै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
तर, सम्झौताको समयले नेटो काटिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले पूर्णता पाएको छैन।
समयमै काम गर्न नसक्नु, काम नहुनु र पूर्णता नपाउनुमा जिम्मेवार छ काठमाडौं महानगरपालिका।
यसको एकमात्रै कारण हो, महानगरले आफै बनाउँछु भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागलाई काम गर्न नदिनु।
सुरुमा प्राधिकरण र पुरातत्व विभागले बनाउने भने पनि जनतप्रतिनिधि आएपछि महानगरले काममा भाँजो हाल्यो।
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण आफैं गर्ने भन्यो।
पहिले सर्वसाधारण तथा केही अभियन्ताले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा समूहले चलाएको अभियानलाई सम्पदा निर्माणको जिम्मेवारी दिन नसकिने भन्दै महानगरले आफैं बनाउन सक्षम रहेको बतायो।
पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी महानगरले लिए पनि अहिलेसम्म काष्ठमण्डप बन्न सकेको छैन।
पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरका अनुसार काष्ठमण्डपको अझै २५ प्र्रतिशत काम बाँकी छ।
भूकम्पपछिका केही महिना पुनर्निर्माणबारे अध्ययन–अनुसन्धानमा खर्च भएको भन्दै उनले काष्ठमण्डपको काम केही पर धकेलिएको जानकारी दिए।
‘जस्तो पायो त्यस्तै सामग्री प्रयोग गर्न नमिल्ने, स्रोत–साधन अभाव र प्राविधिक कारणले पुनर्निर्माणको काममा केही ढिलाइ भएको हो,’ कुँवरले आयोमेलसँग भने, ‘करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ वैशाखमा उद्घाटन हुन्छ।’
अर्थात्, भूकम्प गएकै दिन (वैशाख १२) गते ऐतिहासिक धरोहर काष्ठमण्डप उद्घाटन हुने तय भएको छ।
कुँवरले वैशाख १२ गते भूकम्प दिवसकै दिन काष्ठमण्डप उद्घाटन हुने जानकारी दिए।
हुन त काठमाडौं महानगरपालिकाले हात हालेका अर्थात् जिम्मेवारी पाएका कुनै पनि कार्यक्रम, योजना, आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
काम गर्छु भन्छ तर गर्दैैन।
महानगर निरीहजस्तै बनेको छ।
महानगर विकासको मुकदर्शक बनेको छ।
पुरातत्व विभागले सुरुमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण, विभाग र महानगरले बनाउने भने पनि पछि महानगरपालिकाले आफैं बनाउन सक्षम रहेको भन्दै काम गर्न नदिएपछि केही ढिलाइ हुन गएको थियो।
पुरातत्व प्रवक्ता कुँवरले विकास निर्माणका काम यति नै समयमा सकिन्छन्, सक्छौं भनेर भन्न नसकिने बताए पनि आवश्यक सामग्री अभावले पनि समयमै बन्न नसकेको स्वीकारे।
‘सांस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर’ काठमाडौं महानगरको नारा हो।
महानगरको थेगो नै बनेको छ यो नारा।
महानगरका प्रतिनिधि जहाँ जाउन्, नारा भट्ट्याउन छोड्दैनन्।
तर, सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण वा पुनर्निर्माणमा भने ढिलासुस्ती र लापरबाही।
काम नगर्ने, भनेको समयमा काम गर्न नसक्ने महानगरको उपमा पाएको छ काठमाडौं महामनगरले। त्यतिमात्र होइन, देशकै ठूलो महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि यही उपमा पाएकोमा दुईमत छैन।
उनले चुनावताका त्यस्तै सपना बाँडेका थिए, जति सुन्दर पहिलेको काष्ठमण्डप थियो।
चुनाव जिते। मेयर बने।
तर, ‘सांस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर’ कुरूप बन्दै गयो।
कारण एउटै थियो, महानगरले काम गर्न नसक्नु।
पुनर्निर्माणमा विभिन्न विवाद आएपछि महानगरले पछि महानगरअन्तर्गत उपभोक्ता समिति गठन गरी काष्ठमण्डपलाई पुरानै शैलीमा निर्माण गरिरहेको छ।
काठमाडौं महानगरले सुरुमा केही विवादका कारण काम गर्न ढिलाइ भए पनि काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाएको छ।
महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भन्दै चैत मसान्तभित्र काम सम्पन्न हुने जानकारी दिए।
‘काठ अभाव, ढुवानी समस्या, अन्य केही सामग्री अभाव र कोरोना भाइरस महामारीका कारण पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब थोरैमात्र काम बाँकी छ, भूकम्प दिवसका दिन उद्घाटन हुन्छ।’
महानगरपालिकाले सुरुदेखि नै काम गर्न नसकेको प्रस्ट हुँदा–हुँदै अहिले कोरोना भाइरस कारण देखाएको छ।
उसले बारम्बार कोरोना भाइरसले काम गर्न समस्या भयो, नत्र अहिले सकिन्थ्यो भनिरहेको छ।
जबकि, कोरोना भाइरस महामारी महानगरको बहानामात्र हो।
आफ्नो कमजोरी लुकाउने माध्यम हो।
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि सरकारले करिब १९ करोडबराबरको लागत अनुमान गरे पनि १३ करोडमा सम्पन्न हुनसक्ने देखिएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकममध्ये काठमाडौं महानगरले १० करोड उपलब्ध गराइसकेको छ।
काष्ठमण्डप कल्पवृक्षको एउटै रूखको काठबाट बनेको भन्ने विश्वास गरिन्छ।
काष्ठमण्डप नामक सत्तलको नामबाट उपत्यकाको नाम काठमाडौं रहन गएको भन्ने इतिहास पाइन्छ।
समितिले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम २०७५ वैशाखबाट सुरु गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २७, २०७७